राशिफल Archives - Kavre Online
सुनका गरगहनालाई मानिसहरुले धेरै अगाडी देखि प्रयोग गर्दै आएका छन् । सुन्दरतालाई बढावा दिन मात्र नभई धार्मिक हिसावले पनि सुनका गहनालाई शुभ मान्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रलाई आधार मान्ने हो भने हरेक धातुको भिन्न-भिन्न ग्रहसँग सम्बन्ध हुने गर्छ। सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरुले एक व्यक्तिको शरीरमा रहेको धातु अनुसार असर देखाउन ज्योतिषशास्त्रको भनाइ रहेको छ। कहिले काहीं शरीरमा हालत धातुका गहना रहनाले विभिन्न ग्रहको नकारात्मक असर हुने गर्छ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार सुनका गहनालाई लापरवाही गरेर प्रयोग गर्नु हुँदैन। सुनको गहना लगाएको कारणनै भाग्योदयमा असर पर्न सक्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार विभिन्न तीन राशि हुने व्यक्तिहरुले कहिले पनि सुनको औंठी र गहना लगाउन हुँदैन। मेष कन्या र धनु राशि भएकाहरुले हातमा सुनका औंठी लगाउँदा मात्रै पनि प्रगतिमा वाधा पुग्न सक्छ। यी तीन राशि भएका व्यक्तिहरु आफ्नो जीवनमा द
सबैको चाहना अरु भन्दा आर्थिक तबरले सम्पन्न बनांै भन्ने रहेको हुन्छ । यहि सोचको कारणले गर्दा आफूले सकेजतिको मेहनत प्रायले गरेकै हुन्छन् ।ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बन्नको लागी राशीको महत्वपूर्ण हात रहनेकुरा बताउँछन् । ज्योषित शास्त्रका अनुसार मेष र वृश्चिक राशीलाई सबैभन्दा गरिबी राशीको रुपमा लिइएको छ । यस्ता राशीलाई जीवनमा आर्थिक अभाव रहने कारुण यस्ता उपायहरु अपनाउने पनि बताउँछन् । १.मेष राशी मेष राशीका व्यक्तिहरुले जतिनै पैसा कमाए पनि उनीहरुलाई आर्थिक अभाव भइरहन्छ भनिएको छ । यस्तो समस्यालाई समधान गर्नको लागी यस्ता राशी भएकाले आफ्नो घरमा दैनिक रुपमा पूजाँ गरी घरको प्रवेश द्धारमा दिप बाल्ने र खुसार्नीको धुवाँ लगाउनले आर्थिक संकट हुदैन् । २. वृश्चिक राशी वृश्चिक राशी हुनेहरुलाई कुनै पनि काममा अगाडी बढ्दा क्रृणमा फस्ने सम्भावना एकदमै बढि भने आर्थिक अभावले पनि प
भविष्यलाई बुझ्ने क्षमताका भएका यी ४ भाग्यमानि राशिहरु यस्ता छन् !
धेरैले ज्योतिषसँग खासै सरोकार पनि राख्दैनन, र विश्वास पनि गदैनन् तर ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसको जीवन राशी अनुसार चल्छ भनिएको छ । राशिले मानिसको गृह वा नक्षत्रमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिने गर्दछ । सत्य कुरा के हो भने मानिसहरुले समस्याको समाधान ज्योषितहरुबाट समाधान पनि गरेका छन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसको जीवनलाई राशीफलले ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । राशीफलमा मानिसको विशेष खुबी भएको कारणले गर्दा यसलाई धेरै पहिले देखी विश्वास गरिदै आइएको छ । एक आलेखमा राशिको महत्व र खुवीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ , जसमा सबै राशि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको र सबैभन्दा बलियो राशीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा बलियो र बलवान राशी ४ राशी रहेका छन् । यी राशिका मानिसहरु अरुले दबाएमा दबेर बस्नुपर्ने बाध्यता भने रहको कुरा उल्लेख गरिएको छ । लागौ, सबैभन्दा भाग्यमानि ४ राशी यस्ता
ॐ लेख्दै वि.सं. २०७६ असोज २ गते बिहीबारको राशिफल पढ्नुहोस आजको कार्य सफल हुनेछ
मेष हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ। आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ।लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ। हतारमा निर्णय लिबँदा काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। तापनि दिगो काम सुरु गर्ने समय छ। धेरै बोल्दा समस्या आउन सक्छ। बृष आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीले उत्साह जगाउनेछन्। व्यवसायमा फाइदा नगण्य उठे पनि स्वाभिमानको रक्षा गर्न सफल भइनेछ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नाले यात्रा सम्भावित छ। मिथुन व्यवसायमा थप लगानी आवश्यक पर्नेछ। भैपरी आउने समस्याले खर्च बढ्नेछ भने आलस्य गर्ने बानीले पछि परिनेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। प्रयत्न गर्दा व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टामा लाभ मिल्नेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। आम्दानी बढ्नेछ। रोकिएको काम बन्नेछ
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) गरिएको प्रयास सफल हुन सक्छ । तर्कवितर्क, वादविवाद, छलफल र पढाइलेखाइका क्षेत्रमा सक्रिय भइने छ । दिन भाग्यशाली भएर देखा पर्नेछ । दिउँसोबाट प्रणयसुखका लागि अनुकूल समय बन्नेछ । प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । सोच्दै नसोचेका कामहरू सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । पराक्रम बढ्नुका साथै शरीर फुर्तिलो रहने छ । बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) काम गर्दा आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक आदि विभिन्न उपलब्धीहरू हासिल हुनेछन् । कुनै झैझगडा, विवाद वा तर्कवितर्कमा सरिक भई निर्णय दिन बाध्य हुनु पर्नेछ । दिन छिप्पिंदै जाँदा आर्थिक तथा शारीरिक शक्तिमा ह्रास आउने छ । छटपटी र असन्तुष्टि बढ्ने छ । स्वास्थ्यमा हलुका असर पर्ने सम्भावना छ, खानपान र आहारविहारमा सतर्क हुनुपर्छ । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) दिउँसोबाट ज्ञानगुन र दार्शनिक विषयमा आकर्ष
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।!सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।!
शालिकरामले बनाएकोओर्जिनल भिडियो बच्चा नभएको पिडा पनि पोखेका रहेछ्न – हेर्नुस भिडियो
काठमाडौं । रवी लामिछानेविरुद्ध पत्रकार सालिकराम पुडाशैनीकी श्रीमती सम्झना घिमिरेले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा किटानी जाहेरी दिएकी छिन् । गएको साउन २० गते चितवन बसपार्कस्थित होटल कंगारुमा पत्रकार शालिकराम झु ण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । पुडासैनीले म र्नुअघि आफुलाई आत्मह त्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै भन्दै चर्चित संचारकर्मी रवी लामिछाने, युवराज कडेल र अस्मिता कार्कीको नाम लिएर भिडियो रेकर्ड गरेका थिए । सो भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि तिनै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो लामिछानेसहित तीन जनाविरुद्ध पीडित परिवारले आइतवार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । मृतककी श्रीमती सम्झनाले आफैं प्रहरीमा उपस्थित भएर किटानी जाहेरी दिएकी हुन् । किटानी जाहेरीमा उनले आफ्ना श्रीमानलाई लामिछाने, कँडेल र कार्कीले ह त्याको बाटो रोज्न बाध्य पारे
काठमाडौँ- आजभन्दा ठिक एक वर्षअघि लागू भएको मुलुकी अ९पराध संहिताको दफा १८५ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई आ९त्मह९त्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ यसै दफालाई टेकेर आ९त्मह९त्या दुरुत्साहन कसुरमा गत आर्थिक वर्ष नेपाल प्रहरीले ६२ वटा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। आ९त्मह९त्याअघि लेखिएको ‘नोट’मा नाम किटेकै वा पोलेकै आधारमा प९क्राउ गरी मुद्दा चलाइयो। पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल नोटमा नाम किटेकै आधारमा भन्दा पनि आ९त्मह९त्या गर्न ‘एक्स्ट्रिम’ भूमिका खेलेको अवस्थामा यो दफाको परिकल्पना गरिएको हुनसक्ने बताउँछन्। कसैले गाली गरेको वा पि९टेकै भरमा घ९ टना हुन थाल्यो र त्यसमा यो दफा लागू गर्न थाल्यो भने त्यसले समाजलाई अर्कैतिर लैजाला। कसैले बारम्बार यातना दिइरहेको छ र उसले कुनै विकल्प देख्दैन र मृ९ त्युको बाटो रोज्छ भने यस्तो परिस्थितिमा यो दफाको परिकल्पना गरिएको
काठमाडौं। ज्योतीष अर्जुन क्षेत्रीले रवि लामिछाने र उनका समर्थकलाई नआत्तिन आग्रह गर्दै फेसबुकमा स्टाटस राखेका छन् । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका चल्दै गर्दा क्षेत्रीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका हुन् । उक्त स्टाटसमा क्षेत्रीले अबको १० देखि १८ दिन भित्र लामिछाने धरौटीमा रिहा हुने बताएका छन् । केतु र राहु दृस्ठिले गर्दा २-३ महिना सम्म लामिछानेको टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द रहने क्षेत्रीले स्टाटसमा उल्लेख गरेको छन् । मंगल निच र चन्द्र प्रबल रहेको बताउदै आन्दोलनका क्रममा २-३ जनाको निधन हुने क्षेत्रीले भबिष्यबाणी गरेका छन् ।उनले लेखेका छन्आत्तिनु पर्दैन घाइते सङ्ख्या पनि थोरै रहन्छ यो लफडा ७ महिना पछि सकिन्छ । शिरमा रहेको सुर्य र पृतीको कृपाले रविको जित पक्का हुने बताउदै मगल शनि र केतुले अझै ३८ दिन कष्ट पाँउने र विरोध भत्सर्ना र चर्चा धेरै हुने क्षेत्रीले
Posted in राशिफल, रोचक, समाचार
दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी जोडी जुराउन र सन्तान माग्नकै लागी यस स्थानमा भक्तजनहरु दुप्चेश्वर महादेव पुग्ने गर्दछन् ।सदरमुकाम विदुरदेखि पूर्वमा रहेको राउतवेंशी गाविसको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा यस्तो आस्था बोकेर जाने भक्तजनको आकर्षणले पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वलाई उजागर समेत गरिरहेको छ । हरेक वर्षको पुस महिनामा धान्यपूर्णिमाका अवसरमा साताव्यापी विषेश मेला, शिवरात्री, साउन महिना तथा हरेक सोमबार दुप्चेश्वर मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ ।यहाँ मुख्यतः सन्तान नहुने दम्पतिहरु सन्तान माग्न आउने र महादेवको भक्तिपछि दैवी शक्तिले सन्तान प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । धान्यपूर्णिमादेखि एकसाता लाग्ने मेलालाई परम्परादेखि चल्दै आएको मेला नेपालकै सन्दर्भमा भने अलि अनोठो र फरक छ । ‘जे माग्यो त्यही पूरा हुने’ ध